Steel nehele, Steel Driveway nehele, Marine Ukuhamba Steel nehele - Jiulong
Usizo lwabenza imisenenzi nehele isixazululo umphakeli. Top Umenzi nehele e China.
Ningbo Jiulong Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd (NJMM)
Ingabe ungomunye abakhiqizi eziholela onguchwepheshe esikhiqiza steel cindezela-ashiselwe nehele e China. Akhiwe ezidumile ethekwini edolobheni -Ningbo.
It has traffic elula nendawo aphakeme kuphela ngomzuzu-30 idrayivu Ningbo Lishe International Airport kanye kuphela ngomzuzu-25 idrayivu Ningbo Port-edumile ngamazwe ulwandle port nge inzuzo non-silting, ekujuleni kwamanzi futhi ice-free unyaka round.